Manome sehatra ho an’ny vehivavy sy ny sehatra hafa atao an-jorombala ao Indonezia ny gazetiboky Magdalene · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2018 3:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, македонски, русский, Ελληνικά, Italiano, Español, English, Türkçe, English
Hatramin'ny taona 2013, namoaka lahatsoratra miresaka momba ireo tovovavy sy vehivavy, ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina lesbiana sy pelaka, ireo manana taovam-pananahana roa ary ireo niova satan-karazana (LGBT), ary ireo vitsy an'isa ara-pinoana ao Indonezia ny Magdalene.
Indonezia no firenena lehibe indrindra manerantany ahitana mponina miozolomana maro an'isa. Ny foto-kevitr'izy ireo amin'ny maha-firenena azy dia ahitana ny fampiroboroboana ny fahamaroana, ny fahalalana onony, ary ny foto-kevitra firindrana ara-pinoana fantatra amin'ny anarana hoe Pancasila.
Ity ambany ity ny fanambaran'ny Magdalena:
Mpanao gazety teo aloha Devi Asmarani, Hera Diani sy Karima Anjani no mpanorina ny Magdalene. Nolazain'izy ireo tamin'ny resadresaka vao haingana fa nikasa hanangana gazetiboky antserasera azo ampiasaina ho sehatra famakiam-boky hafa ho an'ny vehivavy izy ireo tany am-boalohany. Nanazava bebe kokoa i Asmarani:
Taorian'ny dimy taona, nanohy namoaka tantara izay tsy dia raketin'ny fampahalalam-baovao mahazatra matetika ny Magdalene. Ahitana lohahevitra toy ny LGBT, ny fahamaroana, ny fanararaotana ara-nofo sy ny fanalam-baraka vatana ireo lohahevitra saro-pady ireo.